Badweynta xeebta aan badnayn ee dhulku wuxuu iftiimayaa badhtamaha, ruuxiga, iyo qorraxda aan la arki karin. Caalamku waa jidhkiisa, ruuxiisa iyo naftiisa; iyo kadib moodalkan saxda ah waxaa lagu dhajiyay wax walba. Saddexdaas daliil waa saddexda nololeed, saddexda darajo ee gnostic Pleroma, saddexda "wajiga Kabalistic", ee loogu talagalay ANITENT ee qadiimiga, qoduuska da'da weyn, En-Soph weyn, wuxuu leeyahay qaab "ka dibna wuxuu leeyahay qaab ma leh. ”
—Isis Daaha ka Qaaday.
Waxaa jira baahi sii kordheysa oo loo qabo joornaal bogag kuwaas oo u furi doona bandhigga xorta ah iyo eexda ee falsafadda, sayniska, iyo diinta, kuna saleysan anshaxa. WORD waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo baahiyahan. Anshaxu wuxuu ku dhisan yahay walaaltinnimo.
Ujeedadeena ayaa ah inaan siino boos ku aaddan qodobbada ku qornaa xoojinta dhaqdhaqaaq kasta illaa inta shayga ugu weyn uu yahay ka shaqeynta walaalnimada aadanaha.
Banii-adamnimadu waa hal qoys oo weyn, in kasta oo si ballaadhan loogu kala fogeeyo nacaybka isirka iyo caqiidada. Waxaan leenahay aaminaad run ah oo fikirka ah kaas oo qayb ahaan kaliya lagu cadeeyo erayga, "walaaltinimo". Macnaha ereygan wuxuu ku kooban yahay qof kasta, hamigiisa, rabitaankiisa, waxbarashadiisa, iyo horumarkiisa. Waxaa jira fikrado kaladuwan oo kaladuwan oo ku saabsan macnaha erayga walaaltinimada maadaama ay jirto tixgelinta macnaha erayga Runta. Ilmaha yari, ereyga “walaal” wuxuu ku qaadanayaa fikirka ah caawimaad iyo badbaadin qof ka difaaci kara kuwa ka soo horjeedda. Waxaa loola jeedaa walaalkii weyn inuu haysto qof ilaaliya. Qofka xubin ka ah kaniisada, bulshada qarsoon ama naadiga, waxay soo jeedineysaa xubin ka noqoshada. Qofka hantiwadaaga ah wuxuu ku xiraa wadaag ama wada shaqeyn, dareen ahaan xagga dhaqaalaha.
Islaanimo, indho la 'iyo dawooyin laga helay dareenka dunidan cirka isku shareeraya, naftu ma garowdo mowqifkeeda dhabta ah ee nafaha ay wadaagaan.
Walaalnimadu waa xiriirka lama-huraanka ah ee ka dhexeeya nafta iyo nafta. Dhammaan marxaladaha nolosha oo dhan waxay u egtahay inay nafta na baraan runtaan. Daraasad dheer iyo rayn rayn dheer kadib, waxaa imanaaya waqti ah fahamka walaalnimada. Markaas naftu way ogtahay inay run tahay. Tani waxay ku timaadaa sidii iftiinka iftiinka. Fallaaraha iftiinka waxay u yimaadaan qof kasta waqtiyada nolosha qaarkood, sida isku xirka koowaad ee nafta iyo jirkeeda, soo kicinta miyirka adduunka sida ilmo, iyo waqtiga dhimashada. Tooshku wuu yimaadaa, wuu baxayaa, waana la illaaway.
Waxaa jira laba weji oo iftiinka kuwaas oo ka duwan kuwa kor ku xusan, iftiinka iftiinka inta lagu jiro hooyonimada, iyo iftiinka walaalnimada Aadanaha. Waxaan ognahay in bilaha dheer ee xanuunka iyo welwelka iyo murugada, oo ka horreeya dhalashada ilmaha, ay soo nooleeyaan dareenka "hooyada". Xilliga oohinta koowaad ee cunugga hadda dhashay, iyo waqtiga ay dareento in nolosheeda u soo baxayso, waxaa si qarsoodi ah loo muujiyay qalbiyada "hooyada". Waxay ku aragtaa irdaha nolosha dunida ka sii weyn, oo daqiiqad ayaa maskaxdeeda ku soo ifbaxaysa farxad, laambad iftiin ah, adduun aqoon leh, iyada u muujinaya xaqiiqada ah in ay jirto midnimo lala jiro kale, taas oo ah, in kastoo iyada lafteedu aysan weli lafteedu ahayn. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira dareen ecstasy, dareen midnimo, iyo isku xirnaansho lama huraan ah oo udhaxaysa mid ahaanshaha iyo mid kale. Waa muujinta ugu qumman ee is-jeclaan la'aanta, walaaltinimada, jacaylka, oo aan ku dhex leenahay khibradeena aadanaha. Tooshku wuu gudbaa oo waa la ilaaway. Jacaylku, sida caadiga ah, ugu dhakhsaha badan, ayuu u dhacaa tan hooyonimada maalinlaha ah, wuxuuna hoos ugu dhacaa heerka kalinimada hooyada.
Waxaa jira isbarbardhig ku saabsan aqoonta xiriirka cunugga iyo hooyadeed, iyo xiriirka ninka laba-jeer ku dhashay Atman ama Universal Self. Hooyadu waxay dareentaa ehelnimo iyo jacayl ubadkeeda maxaa yeelay, waqtigaas aan qarsoodiga lahayn, mid ka mid ah daahyada nolosha ayaa dhinac laga dhigaa oo waxaa jira kulan, is-afgarad, oo u dhexeeya nafta hooyada iyo nafta ilmaha, mid ilaaliya oo ilaaliya, kan kalena waa in la dhawro.
Neophyte, iyada oo loo marayo nolosha badan ee rajista iyo rabitaanka iftiinka ruuxiga ah, ayaa ugu dambeyntii wuxuu galaa xilligii uu nalku lumayo. Wuxuu ujeedkan u imanayaa maalmo badan oo dhulka ah, ka dib nololo fara badan oo dhammaan heerarka, xaaladaha, duruufaha, dadyow badan. , wadamo badan, inta lagu gudajiro wareegyo badan. Markuu intaas oo dhan maray, wuxuu fahmaa sifooyinka iyo kalgacalka, farxadda iyo cabsida, himilooyinka iyo hamiga ragga kale ee la wadaaga — oo ah naftiisa kale. Waxaa dunida ku dhashay miyir cusub: miyirka walaalnimada. Codka bini-aadamku qalbigiisa wuu toosiyaa. Codku wuxuu u eg yahay sidii oohinta ilmaha dhasha ah dhegta 'hooyada'. In ka sii badan: waxaa jira xiriir laba-geesood ah oo khibrad leh. Wuxuu dareemayaa xiriirkiisa ka dhexeeya waalidka Soul-weyn sida canugga oo kale waalidkiis. Waxa kale oo uu dareemayaa rabitaan ah in la difaaco oo la ilaaliyo, sida hooyadu ubadkeeda ilaalin lahayd. Erayo ma qeexi doonaan miyirkaan. Adduunku iftiiminayaa. Miyirka Universal Soul ayaa ka toosay midkaas. Waa Walaal. Wuxuu laba jeer dhashay, laba-jeer ayuu dhashay.
Sida qaylada ilmuhu ay hooyadeed u kiciso nolol cusub, sidaas oo kale ninku dhaqsi buu u leeyahay nolol cusub ayaa loo furay. Sanqadha suuqa-buuqa, aamusnaanta cidlada aan cidlada lahayn, ama markii keligiis laga fiirsado, ayuu maqlaa qaylada dadka waaweyn ee Agoonta ah.
Wicitaankani wuxuu isaga u furayaa nolol cusub, waajibaad cusub, xilal cusub. Ilmuhu sida hooyadeed ugu yahay hooyadiisuna waa insaanka. Wuxuu maqlay oohintiisa wuxuuna dareemayaa in noloshiisa ay baxeyso. Waxba kama dhergi doono marka laga reebo nolosha loo dhiibtay wanaagga aadanaha. Wuxuu doonayaa inuu u bixiyo sidii aabbe oo kale, oo ay ugu quudiso sidii hooyadeed, oo ay u difaacdo sidii walaalkeed oo kale.
Dadku weli ma soo gelin faham buuxa oo walaalnimo, laakiin waxaa laga yaabaa inuu ugu yaraan ka faalloodo arrintaas, oo uu bilaabo inuu fikradahiisa dhaqan galiyo.